9 Jiona 2011 à 4:45
Ry havana, marina tanteraka ianao amin'ny lafiny ara-dalàna vs diso. Tsy mety izany ary tsy ara-dalàna amin'ny sisin-tany amin'ny tranga sasany. Namaky toerana sasany aho fa 10 hatramin'ny 20% dia mety amin'ny rohy + credit, ary miankina amin'ny contexte ihany koa izany. Ny esoeso, ny "collage" ary ny karazan-javatra hafa dia mahazo fanalefahana kely kokoa.
Saingy tsy maintsy milaza aho fa ilaina ihany ny fahazoan-dàlana raha toa ka "mamerina" ny zavatra manontolo na ampahany betsaka amin'izany ianao.
Ohatra, raha manoratra lahatsoratra amin'ny media sosialy aho ary te-hilaza ANAO, Douglas Karr ary ny lahatsoratro dia teny 600 – 1200 ohatra… ary te-hampiasa teny iray avy amin'ny iray amin'ireo lahatsoratrao aho dia hampiasa teny iray ary hanome attribution nefa tsy mangataka alalana.
Navoakanao an-tserasera izany rehetra izany ary noho izany dia lasa “olom-bahoaka” ianao ankehitriny ary raha tsy maintsy mangataka alalana amin'izay teneniko aho, dia ho lasa tsy ho vita mihitsy ny fandefasana zavatra – misy olona maka andro na herinandro na tsy mamaly mihitsy. Saingy mariho ny ampahany amin'ny isan'ny teny… Ny teny iray dia fehezanteny 1… 2 max ka fehezanteny 1 fotsiny ao anatin'ny fehezanteny 100 – 200 angamba.
ary… tsy mpisolovava aho na inona na inona ka mazava ho azy fa hevitro manokana izany.
9 Jiona 2011 à 10:12
Tsy mety koa ny manao mashup amin'ny OPC (votoatin'ny olon-kafa). Ny fananana ara-tsaina na ny hevitra no arovana. Tsy ny teny ihany. Tsia…
Manaiky aho. Indrindra fa ny tranokala mashup, na lahatsoratra dia mashup ny ankamaroany.
Ahoana ny hevitrao momba ny ampahany? Matetika aho no maka fehintsoratra avy amin'ny bilaogy iray izay hitako fa mahaliana na manentana ny fanahy ho fototry ny lahatsoratra vaovao. Mampiditra rohy miverina sy crédit foana aho.
Tsy ny fahitako azy ireo ry Lorraine… fa ny fahatsapan'ny tompon'ny tranokala. Mbola mandika votoaty ihany ny sombiny – tsy maninona na kely aza ny fitaovana. Ireo mpanohana dia hilaza fa 'fampiasana ara-drariny' ny ampahany iray raha toa ianao ka manao zavatra toy ny fampianarana ny hafa. Na izany aza, isika izay manana bilaogy izay manangana ny marika sy ny orinasantsika dia mahazo tombony amin'ireo sombiny ireo. Na dia tsy mivantana aza izany, dia mety ho voampanga ianao.
Heveriko fa fampiasana ara-drariny foana ny sombiny. Ny olana dia ny fampiasana tsy ara-drariny sy fanararaotana ny hevitra rehetra momba ny fampiasana ara-drariny ny olona. Ny fanontaniana ny amin'ny inona ny sombintsombiny sy ny fomba hamaritana azy io no tena zava-dehibe eto.
Ny fampiasana ara-drariny dia voafaritra mazava ary mila mamaky fotsiny izay lazain'ny fampiasana ara-drariny ianao. Hazavaina tsara eto izany: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use
Misy fomba ara-teknika ho an'ny tompon'ny tranokala manome sombiny, ary raha misy mpanoratra manome izany amin'ny alàlan'ny sakafony, ohatra, dia takatra fa io no *ny sombiny* dia tsy anjarantsika mpitoraka bilaogy ny "mifidy sy misafidy" inona ny paragrafy tiantsika hampiasaina ho sombiny.
Raha tsy voafaritra ny sombiny, dia heveriko fa mety ny mampiasa teny iray avy amin'ny lahatsoratra mba hanomezana teny manodidina ny asa soratanao sy hanomezana rohy. Ataovy azo antoka fa tany am-boalohany ny lahatsoratrao ary ny teny nalaina / sombiny dia tsy misy afa-tsy mba hanondroana hevitra na hanononana olona iray. Tsy maintsy ampahany kely amin'ny lahatsoratra izy io ka tsy tena maka plagiat na mamerina fotsiny, fa tokony ho latsaka amin'ny editorial, critique, satire sy ny toy izany.
Miverina foana ny habetsahan'ny teny ampiasaina avy amin'ny lahatsoratra tany am-boalohany ary ohatrinona ny soratanao no tena manampy lanja ny resaka na lohahevitra? Sa averinao teny fotsiny izay nolazain'olon-kafa ary ny lahatsoratrao dia mifototra fotsiny ary saika tanteraka amin'io fanoratana io? raha tsy manampy lanja ianao dia hanontany tena aho hoe inona no ataonao. Raha ianao kosa etsy ankilany, mitanisa olona na lahatsorany hanohanana ny hevitrao ohatra dia mandehana. Hitondra fanazavana bebe kokoa amin'ny lahatsoratra tany am-boalohany ihany izany ary raha ny mpitoraka bilaogy resahina dia ao anatin'izany mba hahazoana vola amin'ny asa sorany, dia hanampy ihany izany.
Manohitra ny hevitrao manokana ianao, Oscar… ary manohana ny ahy. Ny tena fototry ny olana dia TSY misy fepetra manokana manaporofo na manaporofo ny atao hoe "fampiasana ara-drariny". Tsy misy ifandraisany amin'izany ny isan'ny teny (Jereo: http://www.eff.org/issues/bloggers/legal/liability/IP) Raha voatory ianao… handeha eny amin’ny fitsarana ianao ary eo no fanapahan-kevitra. Amin'izay fotoana izay dia heveriko fa efa nandany fotoana be ianao ary mety ho vola. Izany no teny fampitandremana ataoko – tokony hitandrina ireo bilaogera.
Amin'ny maha-mpamorona ahy dia hitako matetika loatra izany fomba izany amin'ny bilaogy mpamorona. Ny mpamorona dia hanaisotra kaody amin'ny tranokala toy ny Microsoft Developer Network (MSDN), hampiditra izany ao amin'ny lahatsorany, tsy hanome references hoe avy aiza ny loharano ary avy eo dia maneho hevitra momba ny kaody toy ny azy. Na dia tsy milaza mazava aza izy ireo fa asa tany am-boalohany io, dia tsy mitanisa ny asa ihany koa izy ireo. Izany dia mamela anao hanana fahatsapana fa asa tany am-boalohany izy io ary manana fahefana amin'ny lohahevitra izy ireo.
Ireo votoaty rehetra ireo dia tena miverina amin'ny zavatra nianarantsika rehetra, na tokony ho nianarantsika, tany amin'ny lisea momba ny fitanisana asa hafa sy plagiarism. Na dia toa tsy mampidi-doza ho an'ny maro aza izany, dia tsy mifanaraka amin'ny etika. Na dia mahazo alalana hamoaka votoaty indray aza ny afisy, dia mbola manana adidy izy ireo hanonona ny loharanony.
29 Aogositra 2011 à 7:45
Vakio ny lahatsoratrao amin'ny fahalianana lehibe, heveriko fa ny ankamaroantsika dia meloka amin'ny famoahana/famoahana votoaty misy copyright tsy nahazoana alalana avy amin'ny tompony.
BTW, manontany tena fotsiny, nahazo alalana ve ianao handefa ny sarin'i Bart Simpson?
29 Aogositra 2011 à 9:23
Eny, ho hitanao eo amin'ny footer ny fanondroana ny sary – nahazoana alalana raha mbola nisy reference tao amin'ilay lahatsoratra niverina tany amin'ny tranokalany. 🙂
Fanavaozana iray momba izany - hita fa mety hivoaka tsy ho ela i Righthaven. Ny asa fanaovan-gazety ratsy sy ny faharatsian'ny fitsarana dia manao izany amin'ny fankasitrahana!
31 Oktobra 2013 à 4:57
Mahaliana ahy ny mahafantatra, raha nadika avy amin'ny bilaogy hafa mankany amin'ny tranonkala iray ny votoaty. . . ary tezitra ilay bilaogera avy eo, mangataka ny hanalana ny votoaty . . . esorina avy hatrany ny atiny ARY misy fialan-tsiny alefa . . . Manan-jo hametraka fiampangana ve ny bilaogera?
Misaotra anao ary manantena ny hihaino anao aho
31 Oktobra 2013 à 9:35
Eny, Kelsey. Ny fangalarana votoaty dia mangalatra, ny fialan-tsiny rehefa tratra dia tsy manova ny zava-misy. Izany hoe – tsy mbola nanenjika olona ara-dalàna mihitsy aho taorian'ny nesoriny izany.